Wararka Maanta: Sabti, Oct 6 , 2018-Dowladda Soomaaliya oo la xisaabtamaysa hay'adaha ammaanka Muqdisho
"Wixii hadda ka dambeeya dowladda waxay la xisaabtamaysa hay'adaha ammaanka." ayuu yiri wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow Ducaale.
Wasiirka ayaa inta ku daray in wasaaradda Amniga ay la imaan doonto qorsho cad oo lagu sugi doono amniga caasimadda,isla markaana ay ka wada hadli doonaan guddoomiyaha gobolka Banaadir.
"Dardar gelinta amniga ayaa naga go'an, waxaana hay'adaha ammaanka loo shaqo galin doona sidii bishii Ramadaan ee la soo dhaafay oo kale." ayuu yiri Maxamed Abuukar Islow.
Wasiirka amniga ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad looga hadlay ammaanka oo Jimcihii lugu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana munaasabadda lugu soo bandhigay ciidamo dheerad ah oo howlgallada amniga ka qaybqaadanaya.